Lifestyle Archives - Newposts
နာမည်မှာ “K” ပါတဲ့သူဆို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်…
နာမည်မှာ “K” ပါတဲ့သူဆို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်… Fb ပေါ်မှာချောပြီး အပြင်မှာ ချစ်စရာလေးတွေပါ …။ ချစ်ရင်လည်း -ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် ချစ်တတ်တယ် …။ မုန်းတဲ့သူဆို သူ့ရှေ့သေရင်တောင် လှည့်မကြည့်တဲ့ လူစားမျိုး …။ စိတ်ညစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် နေတတ်တယ် …။ ပြောစကားဆိုလည်း သူကိုယ်တိုင်လည်း […]
အနကျရောငျ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှရေဲ့ ထူးခွားတဲ့ စိတျနစေိတျထားမြာ
June 1, 2022 newposts2021 0
အနကျရောငျ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှရေဲ့ ထူးခွားတဲ့ စိတျနစေိတျထားမြား လူတဈယောကျကို အကွိုကျတဈခုစီပါပဲ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအမွငျမတူသလိုအကွိုကျလညျးမတူကွပါဘူး။ အနကျရောငျ ဝတျဆငျသူတှကေ ဆှဲဆောငျမှုပိုရှိကွတယျ ပိုအောငျမွငျကွတယျလို့ လလေ့ာခကျြတှကေ ဆိုထားပါတယျ သငျ့ရဲ့ Favorite Colorကအနကျရောငျဆိုရငျဒီအကွောငျးအရာကသငျ့အတှကျပါ။ အနကျရောငျကွိုကျတဲ့သငျ့ရဲ့ထူးခွားတဲ့စိတျနစေိတျထားတှကေတော့- ၁။ သငျကအမှီအခိုကငျးပါတယျ။ဘယျသူကိုမှအားမကိုးတတျပါဘူး။ ဖွဈသမြှအခွအေနတေိုငျးကိုတဈယောကျတညျးထိနျးခြုပျတတျပါတယျ။ ၂။ အရာရာကို အလေးအနကျထားသူတှဖွေဈပါတယျ။ ရှေးရိုးဆနျပွီးသိုသိုသိပျသိပျနတေတျကွပါတယျ။ ၃။ […]
May 22, 2022 newposts2021 0
လက်သန်းလေးကသိနိုင္တဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ္ထား သင့်ရဲ့လက်သန်းပုံစံကေဖာ်ျပေနေသာ သင့်အေကြာင်းမ်ား လူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ဖဝါးက သူ့ဘဝ အေကြာင်းတြေနဲ့မ်ားစြာပတ်သက်နေလ့ရွိတယ္လို့ ခေတ်အဆက္ဆက် ပညာရွင်တြေက ယုံကြည္ခဲ့ ကြပါတယ်။ ကျြန်တ္တောိုိ့ဆီမွာလည်း လက္ခဏာ ပညာရပ္က ထင်ရွားတဲ့ပညာတစ္ချုဖစ္ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့္လက္က ဘယ်အမ်ိုးအစားထဲမွာ ပါမလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးရင် အျေဖေတြကို တစ္ပုံခ်င်းစီမွာ ဖတ်ကြည့္လိုက္ပါ မြိုသိပ္လြန်းသူ […]
သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံက သင့်အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာသိပါသလား
သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံက သင့်အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာသိပါသလား ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကို ခန့်မှန်းလို့ရနေတယ်ဆိုရင် အံ့သြဖို့ကောင်းပါသလား။ ပုံထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ သင်ဘယ်လိုအကျင့်စရိုက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မှန်တယ်ဆိုရင် သင်ကဘယ်နံပါတ်လဲဆိုတာ ကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားပါဦးနော်… (၁) A ပုံစံ (လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်ကိုင်ပြီး လက်မဖြင့်နှိပ်သူ) ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ အာရုံခံစားမှုအားကောင်းပါတယ်။ ပြိုင်ဖက်ကင်း sexy ကျပါတယ်။ အမှတ်သညာကြီးပါတယ်။ […]
May 21, 2022 newposts2021 0
အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ ရောက်လေရာမှာလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက် အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်မှန်း သိရှိနိုင်မယ့်အချက်ကတော့ လူအများရှေ့မှာ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သလဲ ဆိုတာကနေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး လူကြားသူကြားထဲမှာ ပစ်စလက်ခက် မနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို ရောက်လေရာတိုင်းမှာ လူတွေက အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်လို့ မြင်စေချင်ရင် […]
ရညျးစားရှိတဲ့သူတှေ နားမလညျနိုငျမယျ့ Singleဘဝရဲ့ သူမတူတဲ့ကောငျးကှကျလေးမြား…
ရည်းစားရှိတဲ့သူတွေ နားမလည်နိုင်မယ့် Singleဘဝရဲ့ သူမတူတဲ့ကောင်းကွက်လေးများ… ချစ်သူ ရှိတဲ့သူတွေက ချစ်သူ ရှိတာ ဘယ်လောက် ကောင်းကြောင်း ချီးမွမ်းခန်းဖွဲ့လေ့ ရှိကြပါတယ် …။ ရည်းစားဘဝက ကောင်းတယ်လို့ ဆိုနေကြပေမယ့်လည်း သူ့မှာလည်း ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပိုစိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိလာစေတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူမရှိတဲ့ Single လေးတွေကတော့ တကယ့်ကို ကောင်းကျိုးလေးတွေ […]
သငျ့ရဲ့ နာမညျမှာ ”M” ပါခဲ့ရငျ……
May 20, 2022 newposts2021 0
သင့်ရဲ့ နာမည်မှာ ”M” ပါခဲ့ရင် ဒီစိတ်ထားလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား…ဖြေကြည့်လိုက်နော် ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+(နာမည်မှာ ”M” ပါတဲ့ သူတွေရဲ့ အဓိက လျှုိ့ဝှက် လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူ တစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်က မွေးရာပါပဲ( အဲ့ဒီ အားနည်းချက် ကိုမှ […]
သောကွာသားသမီးတှရေဲ့ ထူးခွားတဲ့လက်ခဏာ ( ၁၁ )ခကျြ
သောကွာသားသမီးတှရေဲ့ ထူးခွားတဲ့လက်ခဏာ ( ၁၁ )ခကျြ တဈယောကျဆို တဈယောကျပဲ သစ်စာရှိရှိ ခဈြတတျကွ တာသောကွာ ကိုယျ့ခဈြသူ အပျေါမှာ အပွငျပနျးက ဂရုမစိုကျ သလို နတေတျပီး အမွဲတမျးတှေးပွီး ပူပနျပေး တတျတာသောကွာ ဝမျးနညျးတတျတဲ့ စိတျကို အပွငျကို ထုတျပွလေ့ မရှိပဲ စိတျထဲ […]
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်….
May 19, 2022 newposts2021 0
သင်ရဲ့ နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့သော်…. သင့်ရဲ့နာမည္မွာ ”K” ပါခဲ့သော် ရယ္လိုက်ရင် အေသခ်စ္ဖို့ကောင်းတာ 9+(နာမည္မွာ ”K” ပါတဲ့သူတြေရဲ့ အဓိက လ်ွုိ့ဝွက္လက္နက် တစ္ခုပဲ) လူတစ္ဖက်သားကို ကူညီတတ္တဲ့စိတ္က မြေးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနည်းခ်က္ကိုမွ အသုံးခ်သြားတဲ့သူတြေက ရွိသေး)သေဘာထားကြီးပြီး ခြင့္လွှတ္လြယ္တယ်(ဒေါသထြက္လည်းခဏပဲ ပြီးရင်သူမဟုတ်သလိုနဲ့)နောက် နာမည္မွာ ”K” ပါနဲ့သူတြေရဲ့အားသာခ်က္ကခေလးဆန္လြန်းတဲ့အျပုအမူလေးကြောင့် […]
မိန်းကလေးတွေ စိတ်ညစ်လာတိုင်း ဆံပင်တွေညှပ်ပစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မိန်းကလေးတွေ စိတ်ညစ်လာတိုင်း ဆံပင်တွေညှပ်ပစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း… မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျရှုံးမှု တစ်ခုခု စိတ်ညစ်စရာ တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာ သူတို့ကို သူတို့ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားလာတတ်ကြပါတယ်။ အရင်ဆုံး သူတို့ကို သူတို့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကနေပြီးတော့ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး ဒီလိုပြောင်းလဲမှုက စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကိုပါ ထိရောက်မှု ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ များသောအားဖြင့် […]